Fiankinan-doha amin'ny alika: ny fomba hitsaboana azy | Tontolo alika
Fiankinan-doha amin'ny alika: ny fomba hitsaboana azy
Mikaroha ary ento ny baolina Matetika io no lalao ankafizin'ny alika maro, satria ankafizin'izy ireo ny mihazakazaka hanenjika azy io mba "hihaza" azy, ary mangataka anay mba hanipy azy hatrany hatrany. Tsy voatery ho olana izany raha mbola tsy lasa fanintona izy, zavatra mety hitranga mora foana raha tsy mahazo ny saina ilaina ilay biby na mahazo manao fanatanjahan-tena ampy. Ny vaovao tsara dia hoe afaka mamarana an'io fiankinan-doha io isika amin'ny fanarahana torolàlana sasany.
Voalohany indrindra dia tsy maintsy takatsika fa ity lalao ity dia tsy amin'ny natiorany. Ny razamben'ny alika, amboadia dia mandehandeha lavitra ary mihaza sakafo, izay tsy midika hoe mahatratra a toetran'ny fanahiana avo tahaka ny mitady ny baolina. Izahay manokana dia mampiroborobo io fientanentanana io amin'ny fampiharana ity, izay matetika tsy voafehintsika matetika.
Fahadisoana mahazatra indrindra dia ny fanoloana ny dia amin'ny lalao an'ny baolina. Betsaka ny tompona no misafidy ny hisafidy an'ity safidy ity mba hampiononana, amin'ny fikasana ny kodiarana alika raha vantany vao afaka ary avelany irery. Amin'izany fomba izany, tsy manao na inona na inona izahay fa mamporisika ny fientanany foana, satria ny lalao no hany fanatanjahan-tena ataon'ny biby. Izany no maha-zava-dehibe ny laninao amin'ny herinao mandeha lavitra.
Ho fanampin'izany, lakilen'ny fanalahidy fa isika no andao hofehezina ny lalao, izany hoe manara-maso ny toetran'ny alika isika. Ilaina ny manapa-kevitra hoe rahoviana no manomboka ny fotoana ary rahoviana no hifarana, ary koa rahoviana no manipy ny baolina; raha mangataka azy amin'ny alika ny alika dia mila miandry isika milamina.
Ny tetika tsara dia ny manararaotra ilay hetsika fanazaran-tena amin'ny fankatoavana mampiasa fanamafisana tsara. Alohan'ny hanipazana ny baolina dia azontsika atao ny mangataka ny biby fiompintsika hipetraka na hatory, "manery" azy hilamina alohan'ny hihazakazahany mitady ny kilalaony. Alao antoka fa mijery antsika izy, fa tsy amin'ny baolina, alohan'ny manipy azy.
Mikasika ny faharetan'ilay lalao, atolotra anao tsy hihoatra ny 10 na 15 minitra izany, ary manapa-kevitra ny amin'ny tenany isika rehefa hifarana. Vantany vao vita, ny filamatra dia vonjeo ny baolina izay tsy ahitan'ny biby azy, mba hiala tanteraka amin'ity hetsika ity. Miaraka amin'ny fotoana sy ny faharetana dia ho afaka hanafoana ny fitaintainanao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fiankinan-doha amin'ny alika: ny fomba hitsaboana azy
Akanjo karnavaly ho an'ny alika
Ny tombony azo amin'ny harness anti-pull